ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမယ့် Huawei ရဲ့ Smartphone အသစ်! – AsiaApps
December 20, 2017 December 27, 2017 WilliamSmartphone NewsNo Comment on ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့မှာထွက်ရှိမယ့် Huawei ရဲ့ Smartphone အသစ်!
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ မှာထွက်ရှိမှာကတော့ Huawei ရဲ့ Enjoy Series ထဲက Mid-range Smartphone အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Enjoy 7s ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei Enjoy 7s ကို 5.65” FullView display နဲ့ 1080 x 2160 pixel resolution နဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါ။ RAM3GB, Memory Space 32 GB နဲ့ RAM4GB, Memory Space 64GB စတဲ့ Version မျိုးထွက်ရှိမှာပါ။
Camera အပေါက်နှစ်ခုပါဝင်ပြီး တစ်ခုကတော့ 13 MP(Megapixel) ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တစ်ခုကတော့2MP ဖြစ်နေမှာပါ။ Battery Capacity က 3000 mAh (milliamps) ပါဝင်ပါတယ်။ Power Bank တစ်လုံးနီးပါးစာလောက်ရှိတဲ့ Battery Capacity ပါဝင်တာကြောင့် Battery ပိုင်းကတော့ မိုက်ပါတယ်။
Huawei Enjoy 7S Smartphones Announces To Launch December 18th 2017 https://t.co/6LgVQDBKxH pic.twitter.com/TVzDqEWpBU
— clickedwap Tech Blog (@clickedwap) December 14, 2017
Android Ore ရဲ့နောက်ဆုံး Version EMUI 8.0 ကိုလည်းအသုံးပြုထားပါသေးတယ်။ အမည်းရောင်၊ အပြာရောင်၊ ရွှေရောင် အစရှိတဲ့ အရောင်သုံး ရောင်နဲ့ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကိုတော့ တနင်္လာနေ့ (ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်) မှာကျင်းပမယ့် Huawei ရဲ့ Event မှာကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Shazam Music App ကိုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Apple Company!